Bazowuvala ngegiya eliphansi unyaka 'abachithwayo' emdlalweni iMbewu - Ilanga News
Home Izindaba Bazowuvala ngegiya eliphansi unyaka ‘abachithwayo’ emdlalweni iMbewu
Bazowuvala ngegiya eliphansi unyaka ‘abachithwayo’ emdlalweni iMbewu
Babalelwa ku-21 abantu izinkontileka zabo ezingavuselelwanga
UPHELA ngezindaba ezibuhlungu u-2021 kubalingisi nezisebenzi zomdlalo owuchungechunge odlala kwi-e.tv ngo-21h30 ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, Imbewu: The Seed, emuva kokutshelwa ukuthi izinkontileka zabo ngeke zivuselelwe uma kuqala unyaka ozayo. ILANGA lithole ngomthombo ukuthi kube muncu kwezinye izisebenzi okubalwa kuzona nabalingisi balo mdlalo ngesikhathi kuvela ukuthi iningi labo ngeke lisabuya uma kuqala unyaka.
Umthombo uthi lokhu kuvele emuva kokuba i-e.tv eyengamele lo mdlalo, iqashe uphrojusa omusha weziqephu zawo. “Sitshelwe ukuthi uphrojusa omusha uzofika nethimba lakhe azosebenza nalo, ngakho thina ngeke zisavuselelwa izinkontileka zethu obekumele siqale izingxoxo zokuzivuselela njengoba kuphela uZibandlela (December),” kusho umthombo nawo ogawulwe yizembe.
Uthi okubuhlungu wukuthi lesi sinqumo sibehle ngenhla njengoba konke bekusahamba kahle futhi nomdlalo ukhombisa ukwenza kahle ngokwababukeli. Ngokusho komthombo, yize lo mdlalo udidiyelwa yinkampani iGrapevine, ephethwe ngu-Anant Singh, uDuma KaNdlovu noLeleti Khumalo, kodwa konke ekwenzayo ibika kulo phrojusa oqashwe yi-e.tv. “Okubuhlungu wukuthi nayo iGrapevine bekungekho engakwenza ngoba yamukela ekutshelwayo njengoba nayo ithatha imiyalelo kulo phrojusa ozoqala,” kusho umthombo.
Uthe uphrojusa obekhona ushiyile kanti akanalo ulwazi olugcwele ngokushiya kwakhe. Omunye umthombo uthe phakathi kwabalingisi ikusasa labo elisengcupheni, nguNkanyiso Mchunu odlala indawo kaNkululeko Bhengu (osesithombeni). Uthe indaba yokushiya kwakhe kulo mdlalo isiyaziwa kanti bakhona nabanye osekuvelile ukuthi kababuyi. Uthe anesiqiniseko ngakho, wukuthi ithimba lonke lababhali kalibuyi, kuzofika ababhali abasha. ILANGA lihabule ukuthi bangaphezulu kuka-21 abantu abachithwayo kulo mdlalo.
Owengamele ezokuxhumana esiteshini i-e.tv, uMnu Thapelo Ramatsui, ukuqinisekisile ukuqashwa kukaphrojusa omusha walo mdlalo, ozoqala ngonyaka ozayo emsebenzini. Uthi obekhona uthole amadlelo aluhlaza. Uvumile ukuthi zizoba khona izinguquko ezinqala kulo mdlalo, kodwa wenqaba ukuphawula ngokuchithwa kwezisebenzi nabalingisi. Imizamo yokuthola uLeleti iphunzile njengoba ucingo lwakhe beluphosa ILANGA ezihlahleni, kanjalo noNkanyiso ucingo lwakhe belungabanjwa. Ngokwezibalo zokubukelwa kwezinhlelo zikamabonakude ezigcine ukuphuma, Imbewu igabe ngababukeli abawu-4 million.
Previous articleKalikatholakali ithwasa elathunjwa likwagobela
Next articleInselelo yomfundisi ngabahlwempu